Izifo - iBezzia | IBezzia
Senza ihlelo kugula Kuzo zonke iinguqu eziveliswe kwimpilo yomntu. Le nto iguqula imeko yethu yomzimba kwaye ineziphumo ezibi kwimizimba yethu. Ke ngoko, ukusuka eBezzia sifuna ukukunika ulwazi kwaye silumkise malunga neentlobo ezahlukeneyo zezifo ezikhoyo.
Ke ngoko, siya kunika ingqalelo Unobangela wezi zifo, nangona ikwiimpawu kunye nonyango olunokubakho kunyango. Nangona kunjalo, asizukugxininisa kuphela kwinkqubo yokunyanga esi sifo kodwa kwanamathuba abantu okusiphepha.
Siyakukhuthaza ukuba ufunde icandelo lethu elinikezelwe izifo y yenza konke okusemandleni ukubaphepha okanye ubaphathe kangangoko kunokwenzeka.
Yintoni lipedema? Iimpawu kunye nonyango
I-Lipedema sisifo esenzeka kwizicubu ezinamanqatha kolusu, ngakumbi emilenzeni, nangona ...
Isifo esothusayo, iimpawu
Isifo esothusayo sisifo esosulelayo esixhomisa amehlo, sinobuzaza bokuba ...
I-Pharyngitis, umqala obuhlungu, okanye i-tonsillitis? Nangona la magama ahlala esetyenziswa ngokungakhethiyo ukubonisa okufanayo, ...
Yintoni i-diastasis esiswini
Umzimba womntu uphantsi kotshintsho lweentlobo ezahlukeneyo ebomini. Ngamanye amaxesha ufumana ubunzima ...
Periodontitis, yintoni kwaye ungayithintela njani?
por UPau Heidemeyer yenzayo Iinyanga ze3 .
Abantu abaninzi baziva besoyika xa besiya kugqirha wamazinyo, ayothusi into yokuba xa umntu esiya apho ihlala isenzeka ...
Ukubheja kumayeza endalo ukunyanga i-lumbago
por USusana godoy yenzayo Iinyanga ze3 .
Ukunyanga iintlungu ezisezantsi akusoloko kulungiswa ngokukhawuleza. Kuba uhlala ucinga nge ...
Vitiligo, oonobangela kunye nonyango
por UPau Heidemeyer yenzayo Iinyanga ze4 .
Ukuba ukhe wazibuza ukuba yintoni i-vitiligo, ibonakala njani kwaye ukuba ngaba lukhona na uhlobo lonyango lwendalo ...
Indlela yokwenza xa sibetha iimbambo zethu
Xa siwela kwicala lethu kwaye sibetha iimbambo zethu, mhlawumbi loo nxalenye ...
Izilonda ezivela kwimitha yelanga ezivela elangeni zivelisa ulusu lwethu
por UPau Heidemeyer yenzayo Iinyanga ze5 .
Intwasahlobo lixesha nje elifutshane, imozulu elungileyo iqala ukudubula kwaye ilanga liqala ukuchaphazela ngakumbi ...
Ukuxhalaba okugqithileyo: Iimpawu zabantu abahluphekayo kuyo
Kuyinyani ukuba sonke sithanda ukukhathazeka. Ngamanye amaxesha kuba sicinga ngabo basingqongileyo, abanye abaninzi ngenxa yezizathu ...
Thintela ukosuleleka komchamo
por UPau Heidemeyer yenzayo Iinyanga ze6 .
Ukuba ungomnye wabasetyhini abanengxaki yosulelo lomchamo olucaphukisayo amaxesha ngamaxesha, eli nqaku liza ...
Ungayinyanga njani i-decalcification emazinyweni?
Iindidi ezahlukeneyo zamanxeba
I-anyanisi ngokuchasene nokudibana kwempumlo
Usulelo lwegwele lomlomo: oonobangela, iimpawu kunye nonyango
Unyango kunye nonyango lweBartholinitis
Zithini ii-cysts ezisemabeleni?
Izizathu eziqhelekileyo zentlungu yelungu lobufazi